विक्रमको कमाई केमा खर्च गर्दैछन् कमल हासन ? | ईमाउण्टेन समाचार
विक्रमको कमाई केमा खर्च गर्दैछन् कमल हासन ?
असार १, २०७९ पढ्न ३ मिनेट
मुम्बई। दक्षिण भारतीय सुपरस्टर कमल हासनले आफूमा अझै पनि अभिनयको क्षमता कायमै छ भन्ने कुरा हालै रिलिज फिल्म ‘विक्रम’को सफलताबाट प्रमाणित गरिसकेका छन्। लोकेश कनगराजको निर्देशनमा बनेको यो फिल्मले विश्वव्यापी रुपमा ३ सय करोड बढी कमाएको छ ।कमल फिल्मको सफलताले खुशी छन्। उनले यो फिल्म आफ्नो प्रोडक्सन कम्पनी राज कमल फिल्मस इन्टरनेसनलको व्यानरमा निर्माण गरेका हुन् । फिल्मले दिनानुदिन सफलता पाइरहँदा सफलताबाट प्राप्त पैसा कमलले के गर्छन् भन्ने जनचासो बढ्दो छ। यही विषयमा उनले मुख खोलेका छन् ।‘म आफ्नो ऋण तिर्नेछु। म मन भरेर खान्छु र आफ्ना परिवार तथा साथीहरुलाई जे दिनसक्छु त्यो दिन्छु। यति गर्दा मेरो सबै पैसा सकियो भने म भन्नेछु कि अब मसँग केही छैन। अब मलाई दोस्रो व्यक्तिलाई सहयोग गर्न तेस्रो व्यक्तिबाट सहयोगको आश गर्नु छैन। मलाई कुनै विशेष उपनाम पनि चाहिएन । मेरो इच्छा भनेकै मान्छे बन्नु हो’, कमलले भनेका छन्।
फिल्म ‘विक्रम’ सन् १९८६ मा रिलिज फिल्म ‘विक्रम’को सिक्वेल हो। यो फिल्ममा कमलले एजेन्ट विक्रमको भूमिका निभाएका थिए। यो फिल्मको सफलतापछि कमलले तेस्रो सिक्वेलको तयारी गर्दैछन्। फिल्ममा विजय सेतुपति, फहद फासिल र सूर्याको पनि अभिनय छ।
मनोरञ्जन, विश्व‐मा वर्गिकृतbollywood, bollywood news, entertainment, nepali news, विक्रमको कमाई केमा खर्च गर्दैछन् कमल हासन ?
प्रकाशको ‘मन भुल्छ’ चर्चाको शिखर चुम्दै
नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुन सक्छ : कमल थापा
कमल थापाका तीन एजेन्डा : राजसंस्था स्थापना असम्भव, हालको निर्वाचन प्रणाली असफल र पूर्ण स्वतन्त्रतासहित हिन्दू राष्ट्र